महामारीले गर्दा हुने थकानलाई जित्ने​—⁠मदतकारी बाइबल पदहरू र सिद्धान्तहरू
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (लेबनान) अल्बेनियन आम्हारिक आर्मेनियन इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इलोको एस्टोनियन ओरोमो कन्नडा काजाक काबीय किकोङ्गो या लेटा किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज किलुबा कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्यानगोन्डे क्रोएसियन गुजराती ग्रीक चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जापानी टगालोग टर्किश टाटार टेटन डिली डच डेनिश तामिल थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बास्क बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज मले मल्यालम माया मालागासी मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन वेल्श शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सामोअन सिंहला सेबूआनो सोट्सेल स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
महामारीले गर्दा हुने थकानलाई जित्ने
कोभिड-१९ महामारीको डरैडरमा बाँच्नुपर्दा के तपाईँ हैरान हुनुभएको छ? हुनुभएको छ भने त्यस्तो महसुस गरिरहेको तपाईँ मात्र होइन। संसारभरका मानिसहरू महिनौँदेखि यस महामारीको त्रासमा छन्‌ र तिनीहरू योसँगै जिउन सिकिरहेका छन्‌। विश्‍व स्वास्थ्य सङ्‌गठनका युरोप क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर ह्‍यान्स क्लग यसो भन्छन्‌: “कोभिड-१९ महामारीलाई फैलन नदिन थुप्रैले ठूलठूला त्यागहरू गरेका छन्‌। यस्तो अवस्थामा चिन्ता लाग्नु, हताश हुनु र थकित महसुस गर्नु स्वाभाविकै हो।”
यदि तपाईँ पनि यस महामारीले गर्दा थकित महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने हरेस नखानुहोस्‌। बाइबलले थुप्रैलाई यस्तो तनावपूर्ण अवस्थाको सामना गर्न मदत गरिरहेको छ। यसले तपाईँलाई पनि अवश्‍य मदत गर्नेछ।
महामारीले गर्दा हुने थकान भनेको के हो?
महामारीले गर्दा हुने थकान किन गम्भीर कुरा हो?
महामारीले गर्दा हुने थकानलाई जित्न तपाईँलाई कस्ता बाइबल सिद्धान्तहरूले मदत गर्छ?
महामारीले गर्दा थकित हुँदा तपाईँलाई मदत गर्ने बाइबल पदहरू
महामारीले गर्दा हुने थकान कुनै स्वास्थ्य समस्या होइन। बरु यस अभिव्यक्‍तिले महामारीको कारण मानिसहरूको जीवनमा परिवर्तन आएकोले र भविष्य अनिश्‍चित भएकोले मानिसहरूले देखाउने स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई बुझाउँछ। मानिसअनुसार प्रतिक्रिया फरक-फरक हुन सक्छ तर महामारीले गर्दा हुने थकानका केही लक्षणहरू यसप्रकार छन्‌:
खानपान र सुत्ने बानीमा परिवर्तन
सानो-सानो कुरामा चिढिनु
पहिला सजिलैसित गर्न सक्ने कामहरू पनि गाह्रो लाग्नु
कुनै काममा एकाग्र हुन नसक्नु
महामारीले गर्दा हुने थकान हाम्रो लागि र अरूको लागि पनि खतरनाक हुन सक्छ। हामी होसियार भएनौँ भने हामीले अपनाउनुपर्ने सुरक्षासम्बन्धी नियमहरूलाई हल्कासित लिन सक्छौँ। समय बित्दै जाँदा हामी कोरोना भाइरसको खतरालाई बेवास्ता गर्ने हदसम्म पुग्न सक्छौँ, यो भाइरस फैलिरहेको र धेरैको ज्यान लिइरहेको अवस्थामा समेत। विभिन्‍न प्रतिबन्धहरूले गर्दा हामीलाई दिक्क लाग्न सक्छ अनि स्वतन्त्र हुन खोज्दा हाम्रो आफ्नै र अरूको ज्यान पनि खतरामा पर्न सक्छ।
यस्तो तनावग्रस्त अवस्थामा थुप्रैले बाइबलका यी शब्दहरूको सत्यता अनुभव गरेका छन्‌: “विपत्‌को दिनमा तिमी निराश भयौ भने तिम्रो बल घट्‌नेछ।” (हितोपदेश २४:१०) बाइबलका सिद्धान्तहरूले हामीलाई यो महामारीलगायत अन्य निराशाजनक परिस्थितिहरूको सामना गर्न मदत गर्न सक्छ।
सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्‌ तर साथीभाइहरूसित सम्पर्कमा रहनुहोस्‌
बाइबल के भन्छ? “साँचो मित्र . . . दुःखमा साथ दिन जन्मेको दाजुभाइजस्तै हुन्छ।”​—⁠हितोपदेश १७:⁠१७.
यस विषयमा किन चासो राख्नुपर्छ? साँचो मित्रले हाम्रो उत्थान गर्छ। (१ थिस्सलोनिकी ५:११) अर्कोतर्फ आफूलाई अरूदेखि अलग्याउँदा हाम्रो स्वास्थ्य नै खतरामा पर्छ।​—⁠हितोपदेश १८:⁠१.
यसो गरे कसो होला? भिडियो कल वा फोन गरेर अथवा इमेल र मेसेज पठाएर साथीहरूको सम्पर्कमा रहनुहोस्‌। न्यास्रो लागेको बेला साथीहरूसित कुराकानी गर्नुहोस्‌ र नियमित रूपमा तिनीहरूको हालखबर सोध्नुहोस्‌। महामारीको सामना गर्न तपाईँलाई कुन कुराले मदत गरिरहेको छ, त्यसबारे तिनीहरूलाई बताउनुहोस्‌। साथीको लागि कुनै दयालु काम गरिदिने मौका खोज्नुहोस्‌। यसो गर्दा तपाईँहरू दुवैलाई दिन बिताउन सजिलो हुनेछ।
कसै-कसैले के भनेका छन्‌?
“म साथीहरूसित भिडियो कन्फरेन्स गर्ने योजना बनाउँछु। हामी कहिलेकाहीँ दुई-दुई जना मात्र कुराकानी गर्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी समूहमा केही गेम खेल्छौँ वा गफ गर्छौँ। हुन त भेटेरै कुरा गरेको जस्तो त हुँदैन तर यसो गर्दा पनि धेरै प्रोत्साहन मिल्छ। महामारीले गर्दा जीवन कठिन भएको छ। त्यसैले साथीहरूको सम्पर्कमा रहनु र आफ्ना भावनाहरू साटासाट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। हुन त यसो गर्न गाह्रो छ तर हामी सबैलाई एकअर्काको मदत चाहिन्छ।”​—⁠मेगन, क्यानाडा।
“हामीलाई आफ्नो परिवार र साथीभाइको धेरै याद आउँछ। त्यसैले तिनीहरूलाई माया गर्छौँ भनेर देखाउन हामीले विभिन्‍न तरिकाहरू खोज्यौँ। हामीले परिवारै मिलेर साथीहरूको लागि कार्ड र सानो उपहार बनायौँ अनि त्यसमा प्रोत्साहनदायी बाइबल पद पनि लेखेर पठायौँ। यसो गर्दा तिनीहरूले हाम्रो माया महसुस गरे र हामी आफै पनि धेरै खुसी भयौँ। अरूको लागि केही गर्न समय बिताउँदा हामी आफ्नो चिन्ता र दुःख भुल्न मदत पाउँछौँ।”​—⁠एमा र तिनका श्रीमान्‌ नेथन अनि तिनीहरूका छोराछोरी इलाइ र होप, अमेरिका।
हालको परिस्थितिको सदुपयोग गर्नुहोस्‌
बाइबल के भन्छ? “समयको पूर्ण सदुपयोग गर।”​—⁠एफिसी ५:⁠१६.
यस विषयमा किन चासो राख्नुपर्छ? आफ्नो समयलाई बुद्धिमानीपूर्वक चलाउँदा तपाईँले सकारात्मक रहन र बढ्‌तै चिन्ता नगर्न मदत पाउनुहुनेछ।​—⁠लुका १२:⁠२५.
यसो गरे कसो होला? आफूले गर्न नसक्ने कुराहरूमा ध्यान दिनुको साटो हालको परिस्थितिबाट लाभ उठाउने तरिकाहरू खोज्नुहोस्‌। उदाहरणको लागि, व्यस्तताले गर्दा पहिला गर्न नभ्याएको अथवा आफूलाई मन पर्ने कुनै काम गर्न सक्नुहुन्छ कि? परिवारसित अझ धेरै समय बिताउन सक्नुहुन्छ कि?
“हामीले घरमै पनि विभिन्‍न कामहरू गर्न सक्यौँ, जस्तै, हामीले घरवरपर सागसब्जीहरू लगायौँ, आर्ट गऱ्‍यौँ र घर सजायौँ।”​—⁠एभान र तिनकी श्रीमती समान्था अनि तिनीहरूका छोराहरू इलाइ र एडम, दक्षिण अफ्रिका।
“विवाह भएको ३० वर्षमा म र मेरी श्रीमतीले यति लामो समय सँगै बिताएको यो पहिलो चोटि हो। यसले गर्दा एकअर्काप्रतिको हाम्रो माया अझ गहिरो भएको छ किनकि हामीले एकअर्कालाई पहिलाभन्दा अझ राम्ररी बुझ्दै छौँ। भविष्यमा गाह्रो अवस्था आइपर्दा एकअर्कालाई साथ दिन हामी अझ तयार भएका छौँ।”​—⁠आइभन र तिनकी श्रीमती इभ, इटाली।
बाइबल के भन्छ? “सबै कुरा . . . व्यवस्थित ढङ्‌गले होस्‌।”​—⁠१ कोरिन्थी १४:⁠४०.
यस विषयमा किन चासो राख्नुपर्छ? अक्सर थुप्रै मानिसलाई आफूले दिनहुँ गर्नुपर्ने कामको तालिका बनाउँदा ती कामहरू गर्न सजिलो र रमाइलो लाग्छ।
यसो गरे कसो होला? आफ्नो हालको अवस्थासित मिल्ने तालिका बनाउनुहोस्‌। स्कुलको वा अफिसको कामको लागि र घरको कामको लागि अनि व्यक्‍तिगत बाइबल अध्ययनको लागि निश्‍चित समय छुट्ट्याउनुहोस्‌। परिवारसित समय बिताउन, बाहिर जान र व्यायाम गर्न पनि समय छुट्ट्याउनुहोस्‌। बेलाबेलामा आफ्नो तालिका जाँच्नुहोस्‌ र आवश्‍यकताअनुसार छाँटकाँट गर्नुहोस्‌।
“मैले महामारी सुरु हुनुअघिको आफ्नो तालिकालाई कायम राखेको छु। मैले दिनहुँ गर्ने कुनै कामको सट्टामा व्यायाम गर्न थालेको छु तर म बिहान पहिलाकै समयमा उठ्‌छु। मेरो तालिकाले मलाई महामारीबारे बढ्‌तै सोच्नुको सट्टा परिवार र साथीभाइलाई ध्यान दिन मदत गरेको छ।”​—⁠ककेला, दक्षिण अफ्रिका।
“म बिहान उठेर सदाजस्तै आफ्नो लागि खाजा र कफी बनाउँछु। त्यसपछि म कतै जान लागेको जस्तै गरी तयार हुन्छु। यसो गर्दा मैले राम्रो महसुस गर्न र दिनभरि नै फुर्तिलो हुन सकेकी छु।”​—⁠कार्मेल, फ्रान्स।
मौसमअनुसार छाँटकाँट गर्नुहोस्‌
बाइबल के भन्छ? “चतुर मानिस खतरा आएको देखेर लुक्छ।”​—⁠हितोपदेश २२:⁠३.
यस विषयमा किन चासो राख्नुपर्छ? तपाईँ बस्ने ठाउँको मौसम परिवर्तन हुँदा ताजा हावा लिने र घाम ताप्ने त्यत्ति मौका नहुन सक्छ, जुन हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको लागि अत्यावश्‍यक छ।
यसो गरे कसो होला? जाडो मौसम सुरु हुन लागेको छ भने आफ्नो बैठक कोठा वा काम गर्ने ठाउँको सेटिङ प्रशस्त घाम आउनेगरि मिलाउनुहोस्‌। मौसम चिसो भए पनि घरबाहिर गर्न सकिने कामहरूको लागि योजना बनाउनुहोस्‌। सम्भव छ भने बाहिर धेरै समय बिताउन न्यानो लुगाहरूको प्रबन्ध गर्नुहोस्‌।
गर्मी मौसम सुरु हुन लागेको छ भने मानिसहरूले प्रायः घरबाहिर धेरै समय बिताउने भएकोले होसियार हुनुहोस्‌। कतै जानुपर्ने छ भने पहिल्यै योजना बनाउनुहोस्‌ र भीडभाड नहुने समयमा जानुहोस्‌।
“म बस्ने ठाउँमा पानी परिरहने भएकोले मैले सजिलै छाँटकाँट गर्न सकिने तालिका बनाएको छु। घाम लाग्नेबित्तिकै म बाहिर निस्कन्छु। घमाइलो दिनमा बाहिर हिँड्‌दा वा साइकलमा निस्कँदा मुड राम्रो भएको महसुस गर्छु।”​—⁠समिना, फ्रान्स।
“गर्मी मौसममा घरबाहिर निस्केर केही काम गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले दिन बिताउन सजिलो हुन्थ्यो। तर अब जाडो सुरु हुनै लागेकोले घरभित्रै गर्न सकिने कामहरूको सूची बनाउँदै छु।”​—⁠टिफनी, क्यानाडा।
कोभिडबाट जोगिन सावधानी अपनाइरहनुहोस्‌
बाइबल के भन्छ? “मूर्ख मानिसले सोचविचार नगरी कदम चाल्छ र आफूमा बढ्‌तै भरोसा राख्छ।”​—⁠हितोपदेश १४:⁠१६.
यस विषयमा किन चासो राख्नुपर्छ? कोभिड-१९ महामारी प्राणघातक छ। होसियार भएनौँ भने हामी पनि यस रोगबाट सङ्‌क्रमित हुन सक्छौँ।
यसो गरे कसो होला? तपाईँको इलाकाको लागि दिइएका निर्देशनहरू थाह पाउन बेलाबेलामा भरपर्दा स्रोतहरूमा हेर्नुहोस्‌ र आफूले ती निर्देशनहरू पालन गरिरहेको छ कि छैन भनी जाँच्नुहोस्‌। तपाईँको कामले तपाईँ, तपाईँको परिवार र अरूलाई कस्तो असर गर्न सक्छ भनेर विचार गर्नुहोस्‌।
“महामारी फैलन नदिन म आफ्नो तर्फबाट सक्दो गर्दै छु। अरूले सुरक्षासम्बन्धी नियमहरूलाई बेवास्ता गरे पनि म आफू र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्न सधैँ सजग हुन्छु।”​—⁠डेरिन, दक्षिण अफ्रिका।
परमेश्‍वरसितको सम्बन्ध बलियो बनाउनुहोस्‌
बाइबल के भन्छ? “परमेश्‍वरसित नजिक होओ र उहाँ तिमीहरूसित नजिक हुनुहुनेछ।”​—⁠याकुब ४:⁠८.
यस विषयमा किन चासो राख्नुपर्छ? परमेश्‍वरले हामीलाई जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न मदत दिन सक्नुहुन्छ।​—⁠यसैया ४१:⁠१३.
यसो गरे कसो होला? हरेक दिन परमेश्‍वरको वचनको केही अंश पढ्‌नुहोस्‌। बाइबल पढाइको योजनाले तपाईँलाई बाइबल पढ्‌ने राम्रो बानी बसाल्न मदत गर्नेछ।
यहोवाका साक्षीहरूले कोभिड-१९ महामारीको समयमा पनि सभाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाएका छन्‌। उक्‍त प्रबन्धबाट तपाईँ कसरी लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ भनेर थाह पाउन यहोवाका साक्षीहरूसित सम्पर्क गर्नुभए कसो होला? तिनीहरूले संसारभरि नै भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत मण्डलीका सभाहरू, येसुको मृत्युको वार्षिक उत्सव र वार्षिक अधिवेशनहरू आयोजना गरिरहेका छन्‌।
“म खाली समयको सदुपयोग गर्न बाइबल पढ्‌ने गर्छु। यसले मलाई यहोवाका * प्रतिज्ञाहरूमाथिको मेरो भरोसालाई अझ बलियो बनाउन मदत गरेको छ। भविष्य साँच्चै उज्ज्वल छ भनेर मैले देख्न सकेको छु।”​—⁠रोबेर्टो, इटाली।
“मेरो श्रीमान्‌ र म सँगै बाइबल पढ्‌छौँ। हामी शास्त्रपदहरू कण्ठ पार्ने प्रयास गर्दै छौँ। प्रार्थना गर्दा, बाइबल पढ्‌दा र बाइबलको आशा अरूलाई बाँड्‌दा हामीले अहिलेको परिस्थितिसित जुझ्न बल पाएका छौँ।”​—⁠अल्टा र तिनका श्रीमान्‌ यानी, दक्षिण अफ्रिका।
^ अनु. 76 यहोवा बाइबलमा उल्लेख गरिएको परमेश्‍वरको नाम हो।​—⁠भजन ८३:⁠१८.
यसैया ३०:१५: “शान्त होऊ र ममाथि भरोसा गर, तब तिमीहरूले बल पाउनेछौ।”
अर्थ: परमेश्‍वरले दिनुभएका सल्लाहहरूमा भरोसा गर्दा हामी गाह्रो अवस्थामा पनि शान्त रहन मदत पाउँछौँ।
हितोपदेश १५:१५: “दुःखमा परेकाहरूलाई हरेक दिन दुःखै हुन्छ तर हृदयमा आनन्द हुनेहरूको लागि हरेक दिन भोजजस्तै हुन्छ।”
अर्थ: सकारात्मक कुराहरूमा ध्यान दिँदा हामी गाह्रो अवस्थामा पनि आनन्दित हुन सक्छौँ।
हितोपदेश १४:१५: “सुधो मानिसले सुनेको सबै कुरा पत्याउँछ तर चतुर मानिसले सोचविचार गरेर कदम चाल्छ।”
अर्थ: स्वास्थ्यसम्बन्धी सतर्कताहरू अपनाउनुहोस्‌ र त्यस्ता प्रतिबन्धहरू आवश्‍यक छैन भन्‍ने नसोच्नुहोस्‌।
यसैया ३३:२४: “कुनै बासिन्दाले यसो भन्‍नेछैन: ‘म बिरामी छु।’ ”
अर्थ: परमेश्‍वरले सबै किसिमका रोगबिमारको अन्त गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।
बाइबलले महामारीबारे के भन्छ?
केही मानिसहरू परमेश्‍वरले महामारी अनि अरू रोगबिमार ल्याएर मानिसहरूलाई सजाय दिनुहुन्छ भन्‍ने गर्छन्‌। तर बाइबलले यस्तो कुरा सिकाउँदैन।
एक्लो महसुस हुँदा के गर्ने?
एक्लो महसुस हुँदा आशा, खुसी अनि सन्तुष्टि पाउनु असम्भव लाग्न सक्छ। तर त्यसो होइन।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने महामारीले गर्दा हुने थकानलाई जित्ने
ijwbt लेख १३
तनावको सामना कसरी गर्ने?